Berbera: Xarunta Dhaqaalaha iyo Xadaarada Somaliland | Saxil News Network
Berbera: Xarunta Dhaqaalaha iyo Xadaarada Somaliland
Maanta Gelinkii danbe ayay ahayd markii aan soo gaadhay Magaalo Xeebeedka Berbera si aan indhahayga ugu soo arko Magaaladan oo ka mid ah magaalooyinka aan ugu jecelahay Dalkeena.
Isbedelka iyo Horumarka baaxada leh ee ay magaaladu ku talaabsatay waa mid uu markiiiba uu dareemi karo qofkii ay xilliyo hore ugu danbeysay. Laamiyada dhismay iyo quruxda bilicda magaalada ee nadiifta ah ayaa markiiba indhahaaga soo jiidanaya.
Nabadgelyada iyo habsami socodka ganacsiga iyo nidaamka Dawladnimo ee halkan ka jira ayaa ah mid ay waajib tahay in Allaha weyn loogu Mahadnaqo iyada oo Magaaladan Berberi ay ahayd mid waayo kala duwan iyo duruufo qadhaadh soo martay, run ahaan waa magaalo si weyn uga soo kabatay dhibaato kasta oo soo martay, waana magaalo ay dadka ku nooli ay dadweyne iyo Xukuumadba ay gacmaha is haystaan oo ay u qalab qaateen Horumarka Magaalada Berbera oo ah Xaruntii Dhaqaalaha Dalkeena.
Waxaan Farxad ii ahayd inaan la kulmo Halyeey ka mid ah Geesiyaashii dalkeena Xoreeyay gaar ahaan a hormuud ka ahaa Xorayntii Berbera sanadkii 1991. Xiise gaar ah iyo Xusuuso yaab leh ayuu ahaa in Muj. Dhegoweyne aan Berbera kula kulmo xilli Nabadeed oo aynu Dawladnimo haysano taasoo aad uga duwanayd xiligii dagaalkii xoraynta lagu jiray.
Dabcan qofka Berbera soo booqdaa ma dhaafi karo ilaa uu soo booqdo goobaha taariikhiga ah ee magaalada oo ay ka mid tahay Moofadii uu ka shaqayn jiray Aabihii Jacaylka ee Cilmi Boodhari. Waxaa kale oo Xiise gaar ah ii lahaa guriga halkan ka muuqda oo la ii sheegay inay ku noolayd inantii Hodan ee uu Cilmi Jacaylkeeda u dhintay labadoodaba Rabbi Janada ha ugu deeqee.
Amb. Kaysar Cabdilahi Maxamed